June 2019 - MM Live News
​ကျောင်းတက်​ချိန်ေ​​​​​နာက်​ကျသွား၍ တာဝန်​ကျဆရာမမှ ကျောင်းတံခါးဖွင့်​မ​ပေးလိုက်သောအခါ….
နေ့လည်​ပိုင်း​ကျောင်းတက်​ချိန် အချိန်နည်းနည်းေ​​​​​နာက်​ကျသွား၍ ကျောက်ဆည် မြို့မ​ကျောင်းမှ တာဝန်​ကျဆရာမမှ တံခါးဖွင့်​မ​ပေး​သော​ကြောင့်​ အိမ်​ပြန်​ရင်​လဲဆူခံရမှာစိုး​သောအခါ ​ကျောင်းဆင်းချိ်​န်​ထိကျွန်​မတို့အိမ်​နားလမ်းကြား​လေး ထိုင်​​စောင့်​​နေ​သောသနားစရာက​လေး၃​ယောက်​ ​ရေဆာလို့ဆို၍ ကျွန်​မ​ရေဗူး​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ … ဒီက​လေး​တွေသာ မ​တော်​လို့​ပျောက်​သွားခဲ့ရင်​ တာဝန်​အရှိဆုံးက ဘယ်​သူ​တွေဖြစ်​မလဲရှင်​ တချို့​သောဆရာ ဆရာမများ သားသမီးချင်းကိုယ်​ချင်းစာ​စေချင်​တယ်​ပါရှင်…. မူရင်းpost ပိုင်ရှင်ကကျောက်ဆည်ကပါ ….https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2216401371781623&id=100002353449579 (ဒါတွေက မဖြစ်သင့်တော့ဘူး) တကယ်ဆို ကလေးကို နားဝင်အောင် ရှင်းပြတတ်ရမှာ ….ယခင် ပညာရေးစနစ်ဆိုးတွေကြောင့် လူပေါင်းများစွာ ပညာမဲ့လို့ သေခဲ့ကြရပြီးပြီ….. ဆယ်တန်း ကျလို့ ဘဝသေပြီဟုယုံကြည်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့သည် လူပေါင်း သောင်းကျော်ခဲ့ပြီးပြီ… ပညာမဲ့လို လူမိုက် ဒုဇရိုက်သမားများ၏ သားကောင်ဘွ ရောက်၍ သေကြေခဲ့သူပေါင်း မနည်းလှပေ…. ပညာဆင်ခြင်ထုံတရားမရှိသောကြောင့် ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပြီး တရုတ်က နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ယူသွားသည့် အမိမြေကျောက်မြတ်ရတာနာနှင်ရေ ဓါတ်ငွေ့ပါမကျန်ရေအရင်းမြစ်တွေပါ ဆုံးရှုံးမူ […]
June 9, 2019 June 9, 2019 MM Live
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၈ ရက်၊ ရွှေပြည်သာ မီးသတ် စခန်းရှေ့တွင် ကားရပ်တန့်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အချင်းများခဲ့ရာမှ မီးသတ်ဌာနနှင့် အပြန် အလှန်တရားစွဲခဲ့သော ထန်းတပင် အလုပ် သမားဆေးရုံကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်အား လက်ထောက် ဆရာဝန်(ခွဲစိတ်)မှ အထူးကုဆရာဝန် (ခွဲ စိတ်)အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံ ရကြောင်း ၄င်းထံမှသိရသည်။ မေလ ၃ဝ ရက်တွင်ကျင်းပသော ကျန်း မာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲ ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ် စဉ်(၅/၂ဝ၁၉)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လက်ထောက် ဆရာဝန်(ခွဲစိတ်)များမှ အထူးကုဆရာဝန် (ခွဲစိတ်) အဖြစ်တိုးမြှင့်ရာတွင် ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည်ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကာယကံ ရှင်ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုပြောကြားထားသည်။ ”ရာထူးတိုးတာဟုတ်တယ်။ နေရာမ ပြောင်းရဘူး။ အဲဒီဆေးရုံမှာပဲ။ အထူးကု ဆရာဝန်(ခွဲစိတ်)ဆိုတာ အတိုင်ပင်ခံသမား တော်အဆင့်ပဲ”ဟု ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ […]
စစ်ကိုင်း၊ ဇွန် ၈ -၂၀၁၉ မကွေးတိုင်း၊ ထီးလင်းမြို့နယ်က ကျောင်းသားလေး မောင်အောင်ကောင်းဆက်ဟာ ဒီနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် သာသနာ့ဘောင်ကို ရာသက်ပန် သီတင်းသုံးနေထိုင်ပြီး ပရိယတ္တိစာပေတွေကိုပဲ သင်ယူသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို မန္တလေးတိုင်း၊ မလှိုင်မြို့နယ် မလှိုင်မိသားစု ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပြီး အာင်စာရင်းမထွက်ခင် မေလ ၆ ရက်ကစလို့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မြစကြာကျောင်းတိုက်မှာ အရှင်ကုဏ္ဍလ ဘွဲ့အမည်နဲ့ သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ”သာသနာဘောင်ကို ဝင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့ပါ။ ခုလို ဘဝရတာကလည်း အနန္ဒော၊ အနန္ဒငါးပါးရဲ့ ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပါ။ အဲဒီ ကျေးဇူးတွေကို ဆပ်ချင်လို့ တနည်းအားဖြင့် ဘုရားရဲ့ ကျေးဇူးကိုလည်း ဆပ်ချင်လို့၊ အနန္ဒော အနန္ဒငါးပါးကျေးဇူးကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် […]
June 8, 2019 MM Live News
အစိုးရကျောင်းမှာပဲ တက်ပြီး ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးထွက်တဲ့ ခင်ခင်ခ ဘယ်​မှာ​နေ​နေထူးချွန်​တဲ့က​လေးက ထူးချွန်​တာပါပဲ မြင်းခြံမြို့နယ် ထ​နောင်းတိုင်​သူ ဘယ်​မြို့မှ ​ကျောင်းသွားမတက် ​ပါဘူး 2019 ဒီနှစ်​ထ​နောင်းတိုင်ကျောင်းမှာပဲနေပီး ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးထွက်ပါတယ် ဂုဏ်​ယူပါတယ်​ ခင်​ခင်​ခ Kyawzin Thant Unicode ဘယျ​မှာ​နေ​နထေူးခြှနျ​တဲ့က​လေးက ထူးခြှနျ​တာပါပဲ မွငျးခွံမွို့နယျ ထ​နောငျးတိုငျ​သူ ဘယျ​မွို့မှ ​ကြောငျးသှားမတကျ ​ပါဘူး 2019 ဒီနှဈ​ထ​နောငျးတိုငျကြောငျးမှာပဲနပေီး ဘာသာစုံ ဂုဏျထူးထှကျပါတယျ ဂုဏျ​ယူပါတယျ​ ခငျ​ခငျ​ခ Kyawzin Thant
ပန်​ကာမပိတ်​ဘဲ ခရီးထွက်​သွားရာမှ ဝါယာ​ရှော့ခ်​ဖြစ်​ကာ ​နေအိမ်​ မီး​လောင်​မှုဖြစ်​ပွား ကချင်​ပြည်​နယ်​၊ဗန်း​မော်​မြို့တွင်​ ပန်​ကာမပိတ်​ဘဲ ခရီးထွက်သွားရာမှ လူမရှိခိုက်​ ဝါယာ​ရှော့ခ်​ဖြစ်​ကာ ​နေအိမ်​တစ်​လုံး မီး​လောင်​ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်​ပွားခဲ့​ကြောင်း သိရသည်​။ ဖြစ်​စဉ်​မှာ ဇွန်​ ၃ ရက် ည​နေ ၆ နာရီ​ကျော်​ခန့်​က ဗန်း​မော်​မြို့၊မင်းလှရပ်​ကွက်​​ရှိ ဦးဘိုဘို ​နေအိမ်​၌မီး​လောင်​မှုဖြစ်​ပွား​ကြောင်း သတင်းအရ ခရိုင်​မီးသတ်​ဦးစီးမှူးဦးစိုးမင်းခိုင်​နှင့်​သ​န္ဓေ/အရန်​မီးသတ်တပ်​ဖွဲ့ဝင်​များ၊ မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးခင်​​မောင်​​ငွေ နှင့်​အဖွဲ့တို့ကမီးငြှိမ်းသတ်​ယာဉ်​(၂)စီး၊​ရေသယ်​ယာဉ်​(၃)စီး၊အရန်​မီးသတ်​ယာဉ်​(၃)စီးတို့ဖြင့်​ သွား​ရောက်​ကာ ပြည်​သူများနှင့်​အတူ ပူး​ပေါင်းဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်​ခဲ့ရသည်​။ မီး​လောင်​မှုဖြစ်​စဉ်​အား စုံစမ်းစစ်​​ဆေးရာ အိမ်​ရှင်​များ ခရီးထွက်​နေစဉ်​ ​နေအိမ်​အိပ်​ခန်းအတွင်းရှိ ပန်​ကာအား မပိတ်​ဘဲထားခဲ့ရာမှဝါယာ​ရှော့ခ်​ဖြစ်​ကာ မီး​ကူးစက်​​လောင်​ခြင်းဖြစ်​ပြီး မီး​လောင်​မှု​ကြောင့််သွပ်​မိုး အုတ်​ညှပ်​ (၁)ထပ်​တိုက်​​နေအိမ်​တစ်​လုံး မီး​လောင်​ဆုံးရှုံးခဲ့​ကြောင်း ရဲမှတ်​တမ်းအရ သိရသည်​။ ဖြစ်​စဉ်​နှင့်​ပတ်​သက်​ပြီး ဦးဘိုဘို(၃၆)နှစ်​အား ဗန်း​မော်​မြို့မရဲစခန်းက (ပ)၂၀၅/၂၀၁၉ ရာဇသတ်​ကြီးပုဒ်​မ ၂၈၅ ဖြင့်​ အမှုဖွင့်​လှစ်​ဆောင်​ရွက်​ထားရှိ​ကြောင်း သိရသည်​။ ဗန်းမော်ပွင့်သစ် […]
Zawgyi ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ သမီးရှင် မိဘ မောင်နှမ ဆွေမျိုးများ သတိထားကြစေဖို့ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ Nang Khamm Pauk အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပို့လေးကို ApannPyay မှ တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သမီးလင်း..၁၀တန်း​ဖြေပြီး fb သုးံချင်​တယ်​ဆိုလို့..PW ယူထားပြီး သုးံခွင့်​​ပေးခဲ့ပါတယ်​.. မ​နေ့ကသမီးနဲ့..သူ့သူငယ်​ချင်း အချို့ကို Tag တွဲလာလို့ ဝင်​ကြည့်​လိုက်​တာ.. မုန့်​ဘိုးမ​လောက်​ရင်​ သူ့ဆီ လာခဲ့ပါတဲ့.. အာ့နဲ့ ကျမက အခြားaccနဲ့ဘဲ Cb က​နေသွား​မေးလိုက်​တယ်​ ဘာအလုပ်​လဲလို့ ဖတ်​သာကြည့်​​တော့ ​ပေါ်တင်​Public နဲ့ ဆွယ်​တာ​နော်​ သူ့ကိုယ်​သူ အ ထ က ၄..ကတဲ့ လိမ်​တာ..ဝင်​ကြည့်​ကြပါကုန်​ အဲကမ မြင်​ရင်​သူ့Post ဖျက်​​ပြေးပါလိမ့်​မယ်​။ ကျမ သမီးကို Tag တွဲလို့သိခဲ့ရတာပါ လွတ်​လပ်​စွာ […]
2019 နှစ် (6) လပိုင်းအတွက် ၇ ရက်သားသမီး တစ်လစာ ဟောစာတမ်း 2019 နှစ် (6) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း 1.6.2019 မှ 30.6.2019 ထိ မိတ်ဆွေများ အားလုံးအတွက် ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ မိတ်ဆွေများရဲ့ ဘဝအခက်အခဲ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများကို သေချာသိရှိ နိုင်စေရန်အတွက် ဆရာမင်းသုခ ကိုယ်တိုင် ရေးသားပြုစုပေး လိုက်ပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ရင် like and share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ မျှဝေပေးကြပါ။ 2019 နှစ်အတွက် မိမိကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းကို ဆရာမင်းသုခထံဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်သည်။ ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ […]
ရေခဲချောင်းရောင်းသူထံမှ မူးယစ်ဆေး သိန်းထောင့်ခြောက်ရာကျော်ဘိုး ဖမ်းမိ ကချင်​ပြည်​နယ်​ ရွှေကူမြို့နယ်​တွင်​ ​ရေခဲ​ချောင်း​ရောင်းသူထံမှ ဘိန်းဖြူနှင့် စိတ်ကြွဆေး သိန်းတစ်ထောင့်ခြောက်ရာကျော်ဘိုး ဇွန် ၂ ရက်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဗန်းမော် ခရိုင်​မှုခင်းနှိမ်​နင်း​ရေးမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သတင်းအရ ဇွန်​ ၂ ရက်​ ည​နေ ၅ နာရီခွဲခန့်​က ​ရွှေကူမြို့နယ်​ ​ညောင်​ကုန်း​ကျေးရွာအုပ်​စုရှိ ဗန်း​မော်​-မန္တ​လေးမဟာ ဗျူဟာလမ်း၊ မိုင်​တိုင်​အမှတ်​ ၁၉၅ အနီး ​တောလမ်းထိပ်​၌ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ထိုသို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် မဘိမ်း မြို့နယ်​ဘက်​မှ ​တောလမ်းအတိုင်း ရေခဲချောင်းရောင်းသည့် ကျော်စွာဆိုသူ ​​မောင်းနှင်​လာသည့်​ ကန်​ဘို-၁၂၅ ဆိုင်​ကယ်​အား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရပ်​တန့်​ စစ်​​ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရသည် ။ ကျော်စွာလွယ်လာသည့် လွယ်​အိတ်​အတွင်းမှ WYနှင့်​ 88 စာတန်းပါ ပန်း​ရောင်​စိတ်​ကြွရူးသွပ်​​ဆေးပြား ၃၆၁၀၀ […]
ဒီနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ပို့တစ်ခု လားရှိုးမြို့မှာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမှ ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ဦးလေးကြီးနဲ့ အဒေါ်ကြီးတို့ကို ကူညီပေးပြီး ဆေးများလည်း သေသေချာချာ ကရုတစိုက်ထည့်ပေးကာ ပြုစုနေတဲ့ ပို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့လေးကို လူသားချင်းစာနာတတ်သူတိုင်းက ပြုစုပေးနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို လေးစားပြီး ချီးကျူးစကားဆိုကာ Like တွေ Share တွေ လုပ်ကြတဲ့သူတွေလည်း အများအပြားရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အခုလို လူသားချင်းစာနာတတ်တဲ့ စံပြဝန်ထမ်းကောင်းများကို များများလေးစားပြီး ချီးကျူးစကားဆိုခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းကောင်းများ များများပေါ်ထွက်လာပါစေ..။ လေးစားစွာဖြင့်…ApannPyay ဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ တိုင်းရင်းသားဦးလေးကြီးနဲ့အဒေါ်ကြီးကိုကူညီ ပြုစုပေးနေတဲ့ လားရှိုးယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဒီလိုယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်မျိုး တနိုင်ငံလုံး ရှိပါစေDလိုယဉ်​ထိန်း5thing ဦးဦး​မော်​​တော်​ပီ​ကေ​တွေလေးစားတယ်ဗျာ … Credit – Lashio Media Unicode ဒီနေ့ […]